Yaa ka dambeeyay xil ka qaadistii Guddoomiye Dhoobo Daarood? – Maanta Online
Yaa ka dambeeyay xil ka qaadistii Guddoomiye Dhoobo Daarood?
Xaaladda siyaasadeed ee ka jirta maamul goboleedka Puntland ayaa gashay jawi cusub oo ka duwan kuwii hore, kaddib markii Golaha Wakiilada uu xilka ka qaaday guddoomiyihii golahaasi C/Xakiim Maxamed Axmed (Dhoobo Daarood), iyadoo lagu soo oogay eedeymo dhowr ah oo ay ka mid tahay inuusan sameynin xisaab celinta Golahaasi.
Fadhiga golaha Wakiilada Puntland oo ay soo xaadireen 53-Xildhibaan ayaa waxaa u codeysay in guddoomiye Dhoobo xilka laga qaado 49-Mudane, taasi oo uu sheegay Ku xigeenka Golahaasi inay waafaqsan tahay sharciga u degan maamul goboleedka Puntland.
Waxaa kale oo ka mid ah eedeymaha loo jeediyay guddoomiyihii hore ee Golahaasi inuu jebiyay qodobo ka tirsan xeer hoosaadka Golaha oo ay ka mid tahay inaan ciidamo la soo gelin karin xarunta Golaha, kaddib markii ciidamo ilaaladiisa ah ay galeen xarunta golaha.
Eeda ciidamada galay xarunta Golaha ayaa loo qaatay shaqaaqo ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland oo wax ka yar 24-saac ka dhacday magaalada Garowe, hase yeeshee C/Xakiim Maxamed Axmed Dhoobo Daarood ayaa isagu waxba kama jiraan ku tilmaamay dhammaanta eedeymaha loo cuskaday xil ka qaadistiisa.
“Xalay oo dhan waxaa la qeybinayay lacag, waana ogahay in xildhibaa kasta la siiyay 20-Kun Dollar” ayuu yiri Dhoobo Daarood oo sheegay in xil ka qaadistiisa aanay waafaqsaneyn sharciga Puntland ayna tahay mid dano gaar ahaaneed laga leeyahay.
Xildhibaanada Golaha Wakiilada waxaa kale oo ay ku eedeeyeen inuu ku xadgudub qodob qeexaya waqtiga loo ogol yahay inuu khudbad jeediyo fadhiyada Golaha ka dhaca, taasi oo toosh ku ifineysa khudbad uu dhowaan jeediyay Madaxweyne Saciid Dani isla markaana uu uga hadlay arrimo dhowr ah.
Waxaa kale oo maalmihii ugu dambeeyay jiray khilaaf hoose oo u dhaxeeyay Guddoomiyihii xilka laga qaaday iyo Madaxweyne Dani, waxayna xiisaduhu sii laba kacleeyeen markii Madaxweyne Dani u janbay mid ka mid ah Xildhibaanada Golaha oo sheegay in masjid ku yaala magaalada Boosaaso laga tukaday salaad qunuud ah amni darrada jirta darteed.
Eeddda loo jeediyay Madaxweyne Dani ayuu sheegay in xildhibaanka laga doonayo meeshii laga qanuuday, isagoona tilmaamay in mudadii uu xilka hayay ay qabsoomeen howlo kala duwan oo aanay haleelin xukuumadii isaga ka horeysay.
← Xaaladda Gedo iyo maamulka Axmed Madoobe oo qarka u saaran inuu gacantiisa ka baxo gobol muhiim ah
XASAN SHEEKH: “Dowladnimo waaya aragnimo waaye ee ha nala warsado, waxaan sharci ku saleyneyna Dowladdu ma fulin karto” →
Guushaada ha u bedelin guuldaro siyaasadeed